सानो तर आफ्नै : लघुवित्त कर्जाबाटै निर्धक्क कमाई ! (गगन मायाको कथा) ~ Banking Khabar
सानो तर आफ्नै : लघुवित्त कर्जाबाटै निर्धक्क कमाई ! (गगन मायाको कथा)
बैंकिङ खबर । रत्ननगर नगरपालिका १ पसौनी गाउँकी ३९ वर्षिया गगन माया गुरुङ्ग एक सफल कृषक हुन् । उनले १६ कठ्ठा जग्गा भाडामा लिई ३२ वटा टनेलमा च्याउ खेती गरेकी छिन् । व्यवसायमा ५ जना महिला र १० जना पुरुष गरी १६ जना कामदारहरुलाई रोजगारी समेत दिएकी छिन् ।
व्यवसायको कमाईबाट उनले किस्ता तिरी घर खर्च राम्ररी चलाईरहेकी छिन् । उनले जेठी छोरीलाई होटल म्यानेज्मेन्ट र कान्छि छोरीलाई पनि कक्षा १० मा पढाउँदै गरेकि छिन् । पतिलाई पनि बेला बेलामा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको उनी बताउँछिन् । उनले मासिक रु. १ हजारको समृद्धि बचत खाता खोलेकि छिन् । भन्छिन् ‘प्रायः छोरीलाई दुःखको बेला आर्थिक सहयोग दिने भनेको माईती नै हो, निर्धन संस्थाले मलाई दुःखको बेलामा बिना धितो कर्जा दिएर सहयोग गरेकाले निर्धन माईती झै लाग्छ’